Compass: Fitaovan'ny varotra ahafahana mivarotra Tolotra Marketing Pay Per Click | Martech Zone
Ao amin'ny tontolon'ny marketing dizitaly, ny fitaovana fampandehanana varotra dia tena ilaina ho an'ny masoivoho mba hanomezana ny mpiasa ny loharano ilaina amin'ny fametrahana ny vokatra mpanjifa amin'ny fomba mahomby. Tsy mahagaga raha be fangatahana ireo karazana tolotra ireo. Rehefa natao sy ampiasaina araka ny tokony ho izy, dia afaka manome fitaovana ilaina amin'ny masoivoho dokam-barotra nomerika izy ireo mba hanaterana votoaty avo lenta sy mifanentana amin'ny mpividy.
Ny fitaovana enti-mivarotra dia tena ilaina amin'ny fanampiana ireo masoivoho hitantana sy hanamafisana ny tsingerin'ny varotra. Raha tsy misy azy ireo dia mora ny very amin'ny fampahalalana be dia be momba ny tsena ankehitriny sy ny fomba tsara indrindra hanatonana sy hanatonana ny mpividy. Ny fampiharana ny iray amin'ireo fitaovana fanangonana sy famokarana ireo no fomba tsara indrindra hanatsarana ny ezaka ataon'ny ekipanao momba ny varotra sy ny varotra — manala ny asa mafy sy ny toerana hisian'ny hadisoana izay tonga amin'ny fanangonana an'io fampahalalana io tsy miankina. Rehefa mampiasa sehatra mety amin'ny fampandehanana varotra ny masoivoho iray, dia manome tombony be dia be toy ny:
Saving Time: Ny fitaovana iray manontolo dia manangona sy manolotra ny fampahalalana ilaina mba hampahafantarana amin'ny fomba mahomby ny ekipan'ny varotra sy ny varotra amin'ny alàlan'ny fampiasana ny teny fanalahidy mety sy ny pejy fipetrahana tena kendrena. Ny masoivoho dia afaka mahazo vola be na vola be ao anatin'ny antsasaky ny fotoana ilainy amin'ny fanangonana sy famakafakana ireo angona ireo amin'ny fomba mahazatra.
Nitombo ny fahatokisan-tena: Rehefa fantatry ny ekipan'ny varotra mazava tsara hoe inona ny loharano azony eo am-pelatanany, dia mora kokoa ny manakatona ny fifanarahana haingana kokoa sy mahomby kokoa - manome fahatokisana amin'ny fomba rehetra.
Nitombo ROI: Ny sehatra fampandehanana ny varotra dia mamorona dynam-barotra mifantoka kokoa sy atosiky kokoa izay afaka mampitombo ny fahaizan'ny ekipa hanakatona ny varotra sy hanova ny fitarihana, ary amin'ny farany dia mitombo ny fidiram-bola amin'ny ankapobeny.
Na izany aza, tsy ny fandaharan'asa fampandehanana varotra rehetra dia natao mitovy - tsy ampy fotsiny ny fampahalalam-baovao iombonana mba hampitaovana tanteraka ireo matihanina amin'ny varotra. Ny fitaovana fampandehanana varotra mahomby dia manome ireo loharano ilaina ho an'ny fahombiazana ary mandrisika ny famokarana miaraka amin'ny hevi-baovaon'ny ekipa izay mitondra fahombiazana.
Izany no nahatonga antsika hivoatra Sehatra Compass an'ny White Shark Media, ao an-tranonay manokana fivarotana enablement Fitaovana. Ny sehatray dia tsy manome vaovao farany momba ny fironana mifandraika amin'ny indostria sy fitaovana hanampiana amin'ny fanamafisana ny ekipan'ny varotra ihany fa natao mazava tsara ho an'ny pay-per-click (PPC) dokam-barotra, izay misy sehatra hafa mirona amin'ny ezaka doka mahazatra kokoa. Ny Compass dia natao hampihenana ny fahadisoana, hampitombo ny tombony ary hanohanana ny dingana tsirairay amin'ny tsingerin'ny varotra PPC.
Compass nataon'ny White Shark Media
Amin'ny alàlan'ny Compass, manana fitaovana marobe eo am-pelatanany ny masoivoho, ao anatin'izany:
Ny fanaraha-maso dia lafiny tena ilaina amin'ny indostria maro ampiasaina hanombanana sy hanombanana ny fahombiazany. Raha ny momba ny PPC, ny fanaraha-maso dia ahafahan'ny mpivarotra nomerika miditra amin'ny fampahalalana izay afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny Google Ads na Microsoft Campaigns, izay manampy ny ekipan'ny varotra hametraka ireo fanentanana ireo amin'ny fomba mahomby kokoa. Namolavola ny maotera fanaraha-maso izahay mba hamoronana fanaraha-maso miaraka amin'ny tolo-kevitra momba ny fampielezan-kevitra Google sy Microsoft manokana. Ny tatitra dia mora idirana, misintona ary mizara amin'ny endrika PDF.
Amin'ny alàlan'ny maotera fanolorana Compass, tsy mila miantehitra amin'ny fahaizan'olombelona irery intsony ny orinasa mba hamoronana antontan-taratasy mahomby izay mampiditra ny angona ilaina. Ny sehatra Compass dia mamorona tolo-kevitra misy marika fotsy izay misy ny tolo-kevitry ny teny fototra, ny angona mpifaninana, ny fijerena doka, ary ny maro hafa. Ireo antontan-taratasy ireo dia hanampy ny ekipa hanolotra angon-drakitra mitambatra hanohanana sy hiarovana ny paikady sy fanatsarana ny mpanjifa.
Raha toa ka tafahitsoka mandritra ny ampahany amin'ny fizotran'ny varotra ny mpampiasa, dia manana safidy hihaona amin'ny fifampidinihana mandritra ny 2 ora miaraka amin'ireo mpitantana kaonty stratejika natokana ho an'ny White Shark. Mandritra ity fifampidinihana ity, ireo manam-pahaizana amin'ny Compass dia handeha amin'ny ekipa amin'ny alàlan'ny famerenana ny fantsona, ny fikaonan-dàlana amin'ny soso-kevitra, ny paikadin'ny fitomboana, ary ny maro hafa.
Courses amin'ny varotra
Misy hatrany ny toerana hanatsarana ny fomba fiasan'ny masoivoho iray, na inona na inona indostria manokana ananany. Satria mitohy mivoatra ny tontolon'ny varotra, dia zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny mijanona ho vaovao amin'ny fanao tsara indrindra. Amin'ny alàlan'ny akademia an-tserasera an'i White Shark, ireo mpampiasa ny sehatra Compass dia afaka miditra amin'ny PPC sy ny varotra azo alaina sy idirana isaky ny mila izany.
Be dia be ny fampahalalana sy loharano azo ananana ka mety ho sarotra ny mamaritra hoe iza no tena hahasoa ny orinasa na marika. Amin'ny alàlan'ny Collateral Library, ny mpampiasa dia mahazo ny vaovao farany sy voamarina momba ny fironana mitsangana, ny playbook, ny pitch deck, ny pejy iray, ny horonan-tsary, ary ny maro hafa. Amin'ny alàlan'ny Compass, ny zava-drehetra ilain'ny masoivoho iray hanatsarana ny fifandraisany momba ny Google, Microsoft, Facebook, ary ny fanatsarana ny milina fikarohana (SEO) ny vokatra dia eo am-pelatanany.
Satria miha-malaza eo amin'ny sehatry ny indostria ny sehatra fampandehanana varotra, ny orinasa dia mitantana ny fampiasam-bola amin'ny fitaovana izay mety tsy hanome fiantraikany manan-danja. Tena ilaina ho an'ny masoivoho ny manao ny fikarohana sy ny fahazotoana araka ny tokony ho izy mba hisafidianana sehatra izay mety indrindra amin'ny ekipany. Rehefa vita izany, dia handeha hamokatra vokatra tsara kokoa ao anatin'ny fotoana fohy kokoa ireo masoivoho, manome fotoana bebe kokoa lany amin'ny zavatra manan-danja - fampiasam-bola amin'ny mpanjifa.
Tags: dokam-barotramandoa isaky ny kitihodokam-barotra amin'ny karama isan-tsindryppcdokambarotra ppcFanamafisana ny varotrahaino aman-jery antsantsa fotsy
Daniel Alvarado dia manam-pahaizana momba ny varotra nomerika ary VP of Technology at White Shark Media. Izy no tompon'andraikitra amin'ny fitarihana ny ekipan'ny mpamorona kilasy eran-tany ao ambadiky ny White Shark Media's Compass, sehatra iray All-in-One Sales Enablement ho an'ny masoivoho mikasa ny hampitombo ny portfolio-ny Pay-per-Click. Daniel dia manana traikefa mihoatra ny 8 taona miasa amin'ny indostrian'ny teknolojia marketing. Nanome fanohanana avy amin'ny tetikady ara-barotra sy fomba fijery fampandrosoana rindrambaiko amin'ny andraikitra samihafa izy, anisan'izany ny Digital Advertising Manager, Software Architect, ary VP of Tech. Miaraka amin'ny fahalalana be dia be amin'ny teknolojia, manampy ireo fikambanana mampiasa teknolojia mba hamoronana traikefa manan-danja i Daniel, hanamora ny asa sarotra ary hanome lanja ny mpanjifany.